वालुवाटारकाण्ड : संलग्नले आत्मसर्मपण गर ! - Jhilko
काठमाडौं । सरकारले अधिकरणमार्फत आफ्नो स्वामित्वमा लिएको वालुवाटारको एक सय १३ रोपनी विवाद यतिखेर उत्कर्षमा छ । नेपाल सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगले उक्त जग्गामा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुबाटै बेइमानी भएकोले उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने र जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने निश्कर्ष दिइसकेको छ । यो आयोग गठन हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादल र गृह सचिव प्रेमकुमार राईको ठूलो भूमिका छ । यदि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले नचाहेको हुन्थ्यो भने त्रिताल आयोग गठन हुने नै थिएन । भए पनि यति मजवुत प्रतिवेदन दिन सक्ने थिएन ।
तर, विडम्वना सरकारका मन्त्रीहरु नै त्रिताल आयोगले दिएको भावना तोडमोड हुने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले त्यही विवादास्पद जग्गा खरीद गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो भन्दा पनि अझ गम्भीर कुरा– ०५३ साल असोज १९ गते पौडेलले रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको दीपनगरमा सुकुम्वासी बनेर १८ धुर जग्गाको प्रमाण पुर्जा लिएको र त्यो जग्गा समेत बिक्री गरेको खुलेको छ । पौडेलको यो खुलासाले नेपाली राजनीतिमा त्याग, सर्मपण, आदर्श, मूल्य, मान्यता किनारामा धकेलि“दै गएको स्पष्ट हुन्छ । कुनै समय सुकुम्वासी रहेका नेताले सरकारको न्यूनतम मूल्याङ्कनमै यसबेला प्रतिआना पा“च करोड रुपिया“भन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गर्नुले हाम्रा नेता र राजनीतिक हैसियतलाई उजागर गर्दछ ।
१० वर्षभन्दा बढी भूमिगत जीवन बिताएका पौडेल ०५१ सालमा पाल्पाको क्षेत्र नम्वर ३ बाट निर्वाचन लड्दा एक महिना बढी एउटै ज्याकेट लगाएका किस्सा त्यहा“ अझै पनि सुन्न पाइन्छ । तर, अझ भूमिगत जीवन बिताइरहेका बेला त पौडेलको फेर्ने सर्ट, पाइन्ट समेत थिएन । पाल्पा–गुल्मीमा भूमिगत बस्दा सेल्टरदाताहरुले सर्ट पाइन्ट दिएर रातभर एक ठाउँबाट अर्को ठाउंँमा पु¥याइ दिन्थे ।
०५२ सालमा सुकुम्वासीको नाममा लालपुर्जा लिनुले नै पौडेल त्यसअघि कस्तो हैसियतमा थिए होलान ? बुझ्न कठिन छैन । तिनै पौडेल अहिले वालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न भएको भेटिनुले राजनीति कुन धन्दामा रुपान्तरण भइरहेको छ ? यसबेलाको बिडम्वना नै यही हो ।
यो भन्दा पनि दुखद पक्ष के भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समेत यो जग्गाकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको खुलेको छ । यसले सत्तालाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिको नाममा पार्न दलाल बिचौलियाहरु कसरी हावी भइरहेका छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यसर्थ अहिले जोडदार आवाजले भन्नु पर्ने भएको छ–आफ्ना ठाउँमा वालुवाटारको जग्गा ब्यक्तिगत गराउन लागि परेका सबै संदिग्ध पात्रहरुले आत्मसर्मपण गर्नुको विकल्प छैन ।
उनीहरुलाई आत्मसर्मपण गराउन त जरुरी छ नै, दुई तिहाई बहुमतको सरकारले रौ बराबर खुट्टा कमाउनु हुन्न कि सरकारी जग्गा व्यक्तिगत गराउन लागिपर्ने सबै पात्र र प्रवृतिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । सरकार, मन्त्री वा अरु कसैले फेरि तथ्य पत्ता लगाउन अर्को आयोग गठन गरौं भनेमा त्यो जनतामाथि घोर अपमान हुनेछ । किनकि गृहले गठन गरेको आयोगले नै सबै तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले यसैलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्छ ।
भू माफियाद्वारा सरकारी एवम् निजी सम्पत्तिहरुमा अवैध कब्जा गर्नेहरुको यतिवेला सात्तोपुत्लो उडेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले भूमाफियाका विरुद्ध प्रभावी कार्वाही अगाडि बढाएपछि जनतामा केही हदसम्म सुरक्षाको भावना उत्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक एवम् निजी जग्गा माफियाद्वारा अवैध कब्जाको विपक्षमा ओली सरकारले कडा कदम चालेसँगै सरकारको पक्षमा सकारात्मक छाप परेको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायधीश र सभामुखको निवास नै माफियाको योजनामा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेत जोडिनुले भू माफियाको पहुँचको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल त यस प्रकरणमा पूरै मुछिएका छन् ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेता नै जोडिएका र पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई नै प्रभाव पार्नसक्ने विवादास्पद अर्बपति व्यवसायीहरु नै भएकाले यसलाई केपी ओली सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ला र भन्ने प्रश्न सर्वत्र उब्जिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको विशेष पहलमा वालुवाटारमात्र होइन कब्जा गरिएको खुल्लामञ्चमा समेत कार्वाही अगाडि बढाइयो । यसपछि माफियाको रुवावासी चलेको छ ।
तत्काल कार्वाहीको पहल आवश्यक
जुनसुकै स्तरका भए पनि भूमाफिया र यसमा संलग्न पहुँचवालालाई कानुनअनुसार कडा कार्वाही अगाडि बढाउनु पर्छ । अवैध जग्गा सम्बन्धमा नीतिगत र व्यावहारिक निर्णयमा जोडिएकालाई नैतिकमात्र होइन आर्थिक क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्छ । सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाएका र त्यसलाई धितो राखेर बैंकमा पैसा लिएकाहरुबाट अन्यत्र जेथो भराएर पनि असुल्नु पर्छ ।
सार्वजनिक रुपमा देशभरि मिचिएका जग्गा फिर्ता लिनका लागि आम जनतालाई अपील गर्नुपर्छ । सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति फिर्ता गराउन टास्क फोर्स निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा धेरै विकृतिहरु सतहमा आउने प्रबल सम्भावना छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
विवादास्पद वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई पनि मुछिए
सबै रोगका बिरामीको उपचार गर्न मन्त्री ढकालको निर्देशन
मन्त्री ढकाले अहिले नेपालको हकमा समुदायमा फैलावट नभएको स्थितिमा कोरोना भाइरसबाहेकका...
विहिबार सुनको मूल्य बुधबारको तुलनामा तोलामा हजार रुपैयाँ बढेको छ । बुधबार ६९ हजार...